“Lohahevitra mahatafiditra ny rehetra ny miralenta, fa tsy ho an’ny vehivavy ihany” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2018 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Ελληνικά, русский, Français, Italiano, English
Mpikambana ao amin'ny ekipan'ny fandaharan'ny onjam-peo isan-kerinandro “La Movida Independiente” ao amin'ny Wambra Radio any Quito, Ekoadaoro i Johanna Lombeida. Manoratra ho an'ny Transistor Extremo ihany koa izy. Dika an-tsoratra tamin'ny lahatsary momba ny fanadihadiana nataon'i Johanna momba ny zavon-teny manondro ny voambolana “género” (lahy/vavy natao hoe miralenta) ao anatin'ny tontolon'ny Ekoadaoreana ity manaraka ity.
Ireo teny mibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra miisa 3.326 izay navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy Aprily 2018 milaza ny hoe “género” (miralenta) ao anatin'ny angona Media Cloud amin'ny seha-pampitam-baovao 2 amin'ny teny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo ny sary lehibe kokoa)
Ao anatin'ny andiany Rising Frames izay narafitra tao anaty fiaraha-miasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo any Quito, Ekoadaoro ny lahatsoratra. Nikarakara atrikasa ry zareo tamin'ny 21 aprily 2018 ary namory solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinihany ny fomba hanehoan-dry zareo azy ireo na ny olana izay atrehany ao amin'ny angona media Ekoadaoreana sy ny famoronana tantara ho setrin'izany.